काठमाडौं । देशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार पुगे फेरि लकडाउन हुने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहेको आईसीएसको बुधबार बसेको बैठकले २५ हजार सक्रिय संक्रमित पुगे लकडाउन (बन्दाबन्दी) गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।
आजसम्म देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या १७ हजार ४१४ रहेको छ ।
बैठकले संक्रमण दर बढेकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना हुन नसक्ने सेवा र व्यवसाय १ महिनासम्म नखोल्न सिफारिस गरेको पनि गौतमले बताए । २५ हजार बढी सक्रिय संक्रमित भएमा व्यवस्थापन गर्न असहज हुने भएकाले लकडाउन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा ६३७ सहित देशभर भने ११७२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमितमध्ये महिला ४२६ र पुरुष ७४६ जना रहेको गौतमले जानकारी दिए ।
कोरोनासँग कठिन लडाइँ लडेकी सुनिताको त्रासदीपूर्ण ...
अनायास चक्कर आउने गरेको छ ? हुन सक्छ गम्भीर रोगको ...
कति सुत्ने ? उमेरको हिसाबमा थाहा पाउनुस्
यसरी पाउन सकिन्छ मुटुको समस्याबाट मुक्ति
अमेरिकाले लादेको नवउदारवादविरुद्ध लहर बढ्दै, चिलीमा नयाँ संविधान जारी गरिने